Heshiiskii 17 Seteember waa Dhintay waxaana Badalay 19 Febrayo ee Maxaa la Gudboon Farmajo? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaHeshiiskii 17 Seteember waa Dhintay waxaana Badalay 19 Febrayo ee Maxaa la...
Heshiiskii 17 Seteember waa Dhintay waxaana Badalay 19 Febrayo ee Maxaa la Gudboon Farmajo?
Isagoo Farmajo uu ku dhegenaa inaan Jufadiisa qeybteeda degtaa Gedo laga taaban Karin, guddiyada dorashadana uu ka wada dhigtay caruur isaga u shaqeysa oo askar iyo shaqaale ah mushaarkooduna uu ku xeran yahay kolba shaqada loo diro sida ay u qabtaan iyo in Somaliland xildhibaannadeeda aysan iyagu dooran Karin ee ay tahay in isaga dooro ayaa waxaa ka dambeysay 19 Febraayo 2021 oo uu dhiig ku daadiyey dalka.
Haddaba wixii 17ka Sebtember laga soo wada hadlay wax macna ah malaha oo waxaa ka dambeyey wixii dhacay 19 Febraayo 2021 oo ay tahay dadka Somaliyeed, Bulshada caalamka iyo Murashaxiinta inay ku xisaabtamaan.
Maalintaas waxa si cad isu badalay aragtida dowladnimo ee dalka oo hadda noqotay aragti kalitalisnimo oo ku dhisan xoog beenaad ku saleysan qeyb ka mid ah ciidanka oo ah ciidan qabiil oo looga been sheegay inay yihiin ciidan qaran, madaxna looga dhigay maqaarsaar dano gaar ah leh. Waayo ciidan qaran sidaas uma dhaqmaan oo waxay mar waliba xusuustaan dhaartii kutubka quraanka ee ahay d inay difaacayaan dalka, dadka iyo diinta Somaliya ee uma dhaaran inay difaacan danaha ruux raba inuu ku amar ku taagleeyo beel ka mid ah beelaha dalka oo iyada ah beesha bixisaa canshuurta ay ciidanka iyo caruurtooda cunaan.
Farmajo waa shakhsi aan lahayn aragti mustaqbal iyo xusuus taariikheed midna waayo dalkaan uma burburin ciidan la’aan ee waxaa uu u burburay cadaalad la’aan, mana kugu hayn karaan ciidan iyo xoogaa qabiilkaaga u badan oo aad Haramcad ugu yeertay waayo Haramcadda rasmiga ah waxay rabaan nolol iyo Sharaf adiga kaadib mana kuu dulloobayaan waa haddayan ahayn kuwa doqomo ah.
Haramcad iyo Gorgor waxay qabaan tabbabarro ay ku sii jiri karaan marka adiga lagu eryo xabad xabadda hadda doqonowdana waa laga saarayaa ciidanka oo abaalkeed la marsiinayaa, waxaana la soo taagi doonaa maxkamadda ciidamada.
Sidaas daareed dagaale oogenimo waqtigeedii waa dhamaaday oo raggii caanka ku ahaa maantaba qiyaamaha ayey xisaabtooda sugayaan towbana uma furno oo halkii towbada lagu aqbalayey waa ka huleeleen. Waxaa ka nool hal Cumar Finish oo shaqaale kuu ah oo isagana raba inuu kula dhinto, waxaasa nool oo tusaale u noqon kara Cumar Finish iyo kuwa lamid ah kuwa ka towbad keenay oo maanta dalka u shaqeeya oo wanaag iyo horumar ku hawlan.
Talo Ku Socota Farmajo
Haddaba haadaad Farmajow heshid qof si fiican wax kuugu macneeya qoraallada isadaba joogga ah ee MOL, khudbadaha kala daran ee daaha ka rogayaa ruuxa aa tahay oo ay ugu dambeysay tii taariikhiga ahayd ee uu Jeediyey MW Siciid Deni waxaa kuu haboon inaad talooyinkad raacdid oo weli towba ayaad leedahay ee sidaan samee:
Cudurdaar ka bixi dhammaan khaldaadkii aad gashay oo shacbiga raalligelin sii cafisna weydiiso ciddii xukunkaaga wax loogu dhimay .
Raalligein iyo xaal sii madaxdii aad noloshooda khatarta gelisay.
Ka tanasul doorashada iyo Murashaxnimada dhamaanteed oo faraha kala bax shacbiga ha u tashadee.
Wareeji Xilka aad xooga ku haysatid oo u sheeg shacbiga inay wax kaa khaldameen bani’aadamna aad tahay oo sidaad wax u arkeysay aysan ahayn maanata aadan waxba badali Karin kana tageysid si aad taaariikh dambe u yeelatid.
Talada ku wareeji guddoomiyaha Golaha Shacbiga una sheeg inuu 60 maalmood ku qabto doorasho.
Intaan waa kuu talo walaalnimo marada waa kaa dhacday waana lagaa aamin baxay, haddii aad ku sii adkeysatidna waxay la hubaa in shacbiga uu kaa soo harayo oo lagaa adkaan doono, lagun amarsiin doono melihii ay mareen raaggi shacbiga ay ka soo hareen Sida Qadaafi, Zeynul Caabidiin Bin Cali ama Xusni Mubaarak.